သောက်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
သောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေ သို့မဟုတ် အခြားသော အရည်များကိုပါးစပ်မှတစ်ဆင့် မျိုချသည့် လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများစွာအတွက် ရေကို လိုအပ်သည်။ ရေသောက်သုံးမှု နည်းခြင်းနှင့် များခြင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရည်ကို လက်သို့မဟုတ် ခွက်ကဲ့သို့သော ထည့်စရာပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် လောင်းချလိုက်သည်။ ထိုအခါ ရှိုက်သွင်းခြင်းဖြင့် သောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဇွန်းမှသောက်သုံးခြင်းနှင့် ပူသောအရည်များကို သောက်သည့်အခါမျိုးတွင် ဖြစ်သည်။
၁ နည်းလမ်းများ - လူနှင့် တိရစ္ဆာန်
၁.၄ ရေဓာတ်ရရှိခြင်းနှင့် ကုန်ဆုံးခြင်း
၂ လူသားတို့၏ ရေလိုအပ်ချက်
၃ အယ်ကိုဟောပါဝင်သည့် အဖျော်ယမကာများ
နည်းလမ်းများ - လူနှင့် တိရစ္ဆာန်[ပြင်ဆင်ရန်]
လူသားတစ်ဦး၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ရေသည်ရောက်ရှိလာသည့်အခါတွင် ကြွက်သားများက မျိုချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကမ္ဘာမြေဆွဲအားသည်လုပ်ဆောင်မှုများစွာကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါနှင့် သန့်ရှင်းသည့်ရေတွင် နေထိုင်သည့် ရေနေသတ္တဝါတို့သည် ရေသောက်သုံးရန် မလိုအပ်ပေ။ ၎င်းတို့၏ အရေပြားများသည် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့သည့်နည်းဖြင့် ရေကို တဖြည်းဖြည်းစုပ်ယူသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရေငန်တွင် နေထိုင်သည့် ငါးများမှာမူ ရေကူးသည့်အခါတွင် ပါးစပ်မှ တစ်ဆင့်သောက်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် ပိုနေသည့် ဆားများကို ၎င်းတို့၏ ပါးဟပ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပယ်ပစ်ကြသည်။
မရှိမဖြစ်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ကုန်းနေတိရစ္ဆာများအတွက်မူ ရေသောက်ခြင်းကို နေသားကျလျက်ရှိသည်။ အချို့သော ခြေဦးတည့်ရာသို့ သွားလာတတ်သည့် တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူ လတ်ဆက်သည့် အစားအစာများတွင် ရှိနေသည့် အစိုဓာတ်နှင့် အရည်မှတစ်ဆင့် အရည်ကို တည်ရှိနေစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြေအနေများသည် ကိုယ်ထဲရှိရေများကို ရယူသောက်သုံးရန် လှုံ့ဆော်ပေးကြသည်။ မျိုးစိတ်များအပေါ်ကို မူတည်၍ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု နည်းလမ်းများနှင့် ရွေ့လျားများသည် ကြီးမားစွာ ခြားနားကြသည်။ ကန္တာရခရီးသွားလာရာတွင် တိရစ္ဆာများသည် အရည်ရွှမ်းသည့် သစ်ပင်များကို စားသောက်ရသည့်အခါတွင် ရေမသောက်ရပင်လျှင် ၎င်းတို့သည် ရေကို ရရှိနိုင်ကြသည်။
နေ့စဉ်ရေသောက်သုံးခြင်းသည် လူသားတစ်ဦး၏ ခန္ဓာကိုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သည်။ USDA က နေ့စဉ် သောက်သုံးသည့်ရေအားလုံးတွင် သောက်သုံးလိုက်သည့်ရေသာမက အချိုရည်များနှင့် အစားအစာများမှ ရရှိသည့် ရေများလည်း ပါဝင်သည်။ သောက်သုံးရန် ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် ပမာဏသည် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့လျှင် ၃.၇ လီတာ (ခန့်မှန်းခြေ ၁ ဂါလံ) ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးအတွက် ၂.၇ လီတာ (ခန့်မှန်းခြေ ၀.၇၅ ဂါလံ) ဖြစ်သည်။ အခြားသော ဖော်ပြချက်များတွင်မူ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည့် ရေပမာဏကို မြင့်မားစွာသောက်သုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုအတွက် လိုအပ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုးထားသည်။ အာဟာရပညာရှင်များကမူ တစ်နေ့လျှင် ၁.၈ လီတာ (၀.၅ ဂါလံ) သောက်သံးသင့်သည်ဟု ထောက်ခံပြောကြားထားသည်။ သို့သော်လည်း ဤထောက်ခံပြောကြားမှုအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အား မရှိပေ။
သောက်ခြင်းဟူသည့် စကားကို အရက်ပါသည့် အဖျော်ယမကာများ သောက်သုံးရာတွင်လည်း မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအများစုတွင်လည်း အစားအစာများ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ အခမ်းအနားများ စသည်တို့တွင် အဖျော်ယမကာများကို ကျယ်ပြန့်စွာ သောက်သုံးကြသည်လည်း ရှိသည်။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Broom, p. 105.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Curtis, p. 569.
↑ National Academy of Sciences။ Dietary Guidance။ USDA Food and Nutrition Information Center။ United States Department of Agriculture။ 29 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Redirects to the NAS report, Dietary Reference Intakes: Electrolytes and Water (PDF)”
↑ Greenhalgh, Alison (2001)။ Healthy living – Water။ BBC Health။ BBC။ 8 April 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Drink at least eight glasses of wateraday: Really? Is there scientific evidence for "8 × 8"?" (2012). AJPregu.physiology.org 283 (5): R993–R1004. American Physiological Society. doi:10.1152/ajpregu.00365.2002.
↑ "Just Add Water" (2008). Journal of the American Society of Nephrology 19 (6): 1041–1043. ASN. doi:10.1681/ASN.2008030274. PMID 18385417. Retrieved on 31 August 2013. Archived 24 March 2012 at the Wayback Machine.
↑ Ancient Period။ State University of New York။ 19 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သောက်ခြင်း&oldid=727494" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။